IPL 2020: राजस्थान रोयल्सको सामना गर्दै किंग्स इलाभेन पंजाव,क्रिस गेल खेल्दै? – Articles Nepal
Articles Nepal September 27, 2020 0
११ असोज काठमाडौं: इन्डियन प्रीमियर लीग (आईपीएल)को १३ औं सत्रको नवौं खेल आइतबार राजस्थान (आरआर) र किंग्स इलेवन पंजाब (केएक्सआईपी) बीच हुनेछ। फर्ममा रहेका सन्जु स्याम्सन र केएल राहुलको ब्याटवाट रन आए दुबै टिमको लागि बाटो अझ सहज हुने आशा गरिएको छ। अर्कोतर्फ, जोस बटलरको उपस्थितिले राजस्थान रोयल्स टीमलाई मजबुत बनाउनेछ। यो खेल नेपाली समयअनुसार बेलुकी ७:४५ बजेदेखि शारजाह क्रिकेट स्टेडियममा हुनेछ।
आईपीएल रेकर्डको कुरा गर्दा राजस्थान रोयल्स राम्रो स्थितिमा छ। दुबै बीच (२००८-२०१९) सम्म १९ खेलहरू भएका छन् जसमध्ये राजस्थानले १० र पंजाब ८ खेल जितेको थियो। दुबै बीच एक खेल टाई भएको थियो, जुन सुपर ओभरमा पंजाबले जित्यो।
किंग्स इलेवन पंजाबका लागि, अष्ट्रेलियाका अलराउन्डर ग्लेन म्याक्सवेल आफ्नो रन स्कोर बढाउन चाहन्छन्। मोहम्मद शमी र वेस्टइंडीजका शेल्डन कोटरलले किंग इलेवन पंजाबको तीव्र बलिंगको नेतृत्व गर्नेछन् भने लेगस्पिनर रवि बिश्नोई र मुरुगन अश्विनले स्पिन सम्हाल्नेछन् ।
राजस्थान रोयल्स चेन्नईबिरुद्द २१६ रन डिफेन्स गर्न सफल भयो। डेथ ओभरमा जोफ्रा आर्चरले शानदार बलिंग गरे र लेगस्पिनर राहुल तेवाटियाले ३७ रनमा3विकेट लिए।यद्यपि जयदेव उनाडकटको खराब फर्म रोयल्सको समस्याको कारण हो।
निकोलस पुरनको पहिलो २ खेलमा प्रदर्शन खास रहन नसकेपछि तेश्रो खेलमा पन्जाबले क्रिस गेललाई मौका दिन सक्छ। जोस बटलरको आगमन हुने हुँदा चेन्नाई बिरुद्ध खाता नखोली आउट भएका डेभिड मिलर बाहिर हुनसक्छन्।
किंग्स इलाभेन पंजाब
केएल राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, शेल्डन कॉट्रेल, क्रिस गेल, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद शमी, मुजीब उर रहमान, करुण नायर, जेम्स नीशाम, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), ईशान पोरेल, अर्शदीप सिंह, मुरुगन अश्विन, कृष्णप्पा गौतम, हरप्रीत बरार, दीपक हुड्डा, क्रिस जॉर्डन, सरफराज खान, मनदीप सिंह, दर्शन नलकंडे, रवि बिश्नोई, सिमरन सिंह (विकेटकीपर), जगदीश सुचित, तजिंदर सिंह, हार्डस विलजोन.
स्टीव स्मिथ (कप्तान), जोस बटलर, रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन, जोफ्रा आर्चर, यशस्वी जायसवाल, मनन वोहरा, कार्तिक त्यागी, आकाश सिंह, ओशेन थॉमस, एंड्रयू टाई, डेविड मिलर, टॉम कुरेन, अनिरुद्ध जोशी, श्रेयस गोपाल, रियान पराग, वरुण आरोन, शशांक सिंह, अनुज रावत, महिपाल लोमरोर, मयंक मार्कंडेय
Previous Post: सुशान्त ड्र’ग्स प्र’करण: एनसीबीले सो’धपुछ गर्दा दिपिका पादुकोणको रु’वाबासी
Next Post: सुशान्त ड्र’ग्स प्र’करण: श्रद्दा र साराले सुशान्तमाथि लगाए यस्तो आ’रोप